World Dance Day/SEE 2078-Optional First | विश्व नृत्य दिवस/SEE २०७८-ऐच्छिक प्रथम | २०७९ वैशाख १६ | Hamro Patro
विश्व नृत्य दिवस/SEE २०७८-ऐच्छिक प्रथम ( World Dance Day/SEE 2078-Optional First )
नृत्य भनेको के हो ?
नृत्य भावना र मानविय संवेदनाको अभिव्यक्ति हो । नृत्य उत्साहको प्रतिक हो । नृत्य दर्शन पनि हो । मानिस खुशि अभिव्यक्त गर्न नाच्ने गर्दछ । मानिस मात्रै होइन पशुपंक्षि पनि नाच्ने गर्दछन् । मयुर र बाँदर नाचेको हामी सवैले देखेका छौँ । भगवानहरूको पनि नृत्यलाई आ–आफ्नै नामाकरण गरिएको छ, बिहे व्रतबन्ध अनि अन्य कुनै पनि जीवन उन्मुख क्रियाकलाप नृत्यविना परिपूर्ण मानिँदैन । अहिले जुम्बा, हिपहप, ब्रेक डान्स,बालेट, साल्सा लगायतका नाच प्रचलनमा देख्न पाइन्छ । समयको विकासक्रमसँगै नृत्य पेशा पनि बन्न थालेको छ । नाच्न सिकाउने प्रशिक्षक भएर वा कार्यक्रममा नृत्य प्रस्तुत गरेर पनि मानिसले रोजगारि पाएका छन् ।
के नृत्यले स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याउछ ?
नृत्यको अनेक फाइदाहरु भएकाले यसलाई उपयोगी कसरतको रुपमा लिन सकिन्छ । अचेल बिहान योगको अभ्यास गर्ने मानिसहरुले पनि केही समय नृत्यको अभ्यास गर्ने गरेको पाइन्छ । केहि समय नाच्नाले हृदय तथा फोक्सोको अवस्तामा सुधार आउँने गर्दछ । नृत्यले मानिसको मांसपेशि बलियो बनाउँन सहयोग गर्दछ । साथै यसले हड्डिहरु पनि बलियो बनाउँन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दछ । यसर्थ, नृत्यका अनेक फाइदाहरु रहेका छन् ।
विश्व नृत्य दिवसको पृष्ठभूमि के हो ?
आविष्कारक, कलाका विद्वान, शिक्षक र आधुनिक ब्यालेका निर्माता जिन जर्जस् नोभेरे (Jean-Georges Noverre )को जन्म दिनको अवसर पारेर सन् १९८२ बाट विश्व नृत्य दिवस मनाइन्छ । अन्तराष्ट्रिय रंगमञ्च संस्थाको नृत्य समितिले यो दिवस मनाउन सुरु गरेको हो । यो संस्था UNESCO को प्रदर्शन कला को लागि मुख्य साझेदार संस्था हो ।
किन मनाइन्छ विश्व नृत्य दिवस ?
विश्व नृत्य दिवसले आम जनतामा नृत्यको महत्त्वबारे चेतना अभिवृद्धि गर्दछ । यसको लक्ष्य संसारभरका सरकारहरूलाई सबै शिक्षा प्रणालीहरूमा नृत्यको लागि उचित स्थान प्रदान गराउनु पनि हो ।